एकैदिन थपिए १२ हजार संक्रमित, ८ जनाको मृत्यु
पछिल्लो २४ घण्टामा १२ हजार ८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार २५ हजार ९०९ नमूना परीक्षणमध्ये ९४३२ पीसीआर र २५७६ जनामा एन्टिजेन पोजिटिभ देखिएको हो ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमणबाट ८ जनाको मृत्यु भएको छ । हालसम्मको मृत्यु संख्या ११ हजार ६६७ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार थप ३०४० जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
यससँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणमुक्त हुनेहरूको संख्या ८ लाख २७ हजार २७९ पुगेको छ ।
हाल मुलुकभर ८८ हजार ९३४ सक्रिय संक्रमित छन् ।
काठमाडौं महानगर : बालेनको अग्रता कायमै, कसको मत कति ?
काठमाडौं महानगरपालिकामा शुक्रवार बिहान १० बजेसम्ममा ७३ हजार १०९ मत गणना भएको छ । जारी मतगणनामा मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले २७ हजार २२३ मतसहित अग्रता कायम राखेका छन् । उनका न...
११ उपमहानगर अपडेट– तीनको नतिजा सार्वजनिक, तीनमा कांग्रेस र तीनमा स्वतन्त्र अगाडि
वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ६ महानगर, ८ उपमहानगर सहित १२० स्थानीय तहमा मतगणना चलिरहेको छ । ११ वटा उपमहानगर मध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा...
मधेश प्रदेशको ६ पालिकामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी खुम्चिएको छ। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा २६ सिट जितेको लोसपा यस पटक मधेश प्रदेशको ६ र लुम्बिनी प्रदेशको १ सिटमा मात्र जित हात पर्न सकेको छ। यी ह...
काभ्रेको पनौति नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसले जीत हात पारेको छ । सो नगरपालिकामा कांग्रेसका राम सरण भण्डारी १४ हजार ५० मतसहित मेयर पदमा निर्वाचित भएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका भिम ...
कम्युनिस्ट पार्टीको उद्गम थलो मोरङको रतुवामाईमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारले हार व्यहोरेका छन् । २०३५ सालमा नेकपा मालेको पहिलो महाधिवेशन साविकको इटहरा गाविस (हाल रतुवामाई नगरपालिका) मा भएको थियो । रतुवामा...
सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुबैमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । मेयर पदमा कांग्रेसका ललन प्रसाद गुप्ता ७ हजार ८८९ मत सहित निर्वाचित भए । उनका निकटतम प्...
‘उल्टो पैदल यात्रा’ गर्दै मुस्ताङ हिँडेका ऋषि तानसेनमा
रुस र अमेरिकाका शीर्ष सैन्य अधिकारीबीच फोनवार्ता, निस्केला समाधान ?
माधव नेपालको वडामा एमालेको जीत
६३० पालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक, १२० मा गणना जारी